Archive du 24-nov-2021
Miha mafy ny feon-dakolosy
Mbola karakaina sy mitaraina ny tany. Tsy zarizary ny voly rehetra, indrindra, ny voly vary. Toy izany koa ny fiompiana. Hatreo fotsiny dia efa midika fa tsy milamina, fara-faha keliny, ny fiainan’ny 80%n’ny Malagasy,
Ambohitrimanjaka Tratry ny haintany daholo ny tanimbary rehetra
Isan’ny mpamboly vary ny kaominin’Ambohitrimanjaka, hoy ny ben’ny tanana ao an-toerana, Ihajason Randriamanalintsoa,
Tahan’ny fahantrana eto Madagasikara 2 tapitrisa dolara ny vola ilaina amin’ny fanadihadian’ny INSTAT
7,5% ny tahan’ny fahantrana teto Madagasikara tamin’ny 9 taona lasa. Ankehitriny tsy fantatra intsony izany na miharatsy na mihatsara, indrindra taorian’ny fandalovan’ny valan’aretina Covid 19,
Lany tsy nasiam-panitsana ny LFI 2022 Tsy maintsy hiakatra ny vidin-tsavony
Lany tsy nasiam-panitsiana teny anivon’ny antenimieram-pirenena ilay volavolan-dalana mifehy ny tetibolam-panjakana ho amin’ny taona 2022 ( LFI 2022).
Zotra rezionaly sy nasionaly Hiakatra tsikelikely ny saran-dalana
Miakatra tsikelikely ny saran-dalana miazo ny faritra hiantsorohan’ny zotra nasionaly sy rezionaly. Nisantatra izany ny mampitohy ny distrikan’i Mahanoro amin’Antananarivo izay lasa 30.000 Ar raha 20.000 Ar teo aloha.
Antoko HVM “Azo atao ny mampiato amin’ny asany ny filoham-pirenena”
Anatin’ny fanetsehana ny rantsa-mangaikany isan-tokony amin’izao fotoana izao ny antoko politika, Hery Vaovao ho an’i Madagasikara, hoy ny sekretera jeneraly lefitry ny HVM,
Raharaha « fikasana hamono ny Filoha » Handalo fitsarana amin’ny 6 desambra
Handalo eo anivon’ny Fitsarana misahana ny heloka bevava na CCO (Cour Criminelle Ordinaire) ny 6 desambra ho avy izao ny raharaha “Apollo 21”
Fampitohizana an’Antanimahitsy sy Ambodivona Mitohy ny fanamboaran-dalana
Mitohy ny fanamboaran-dalana mirefy 2km kaominin’Ambohitrimanjaka, ho any Ambodivona, dia mitohy ny fanamboaran-dalana mirefy 2km eo mba ho ara-dalana tsara ny lalana na ny lakan-drano.
Fanendahana teny amin’ny ZZ mobilier Lehilahy roa no voasambotry ny polisy CSP Itaosy
Lehilahy miisa 02 no nosamborin’ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP Itaosy ny alakamisy 18 novambra teo ary natolotra ny CSP7 67ha mba hanaovana fanadihadiana mahakasika fanendahana izay niseho teny amin’ny
Fampiakarana saran-dalana Tsy mitovy hevitra ny koperativa sy ny ministera
Tsy mitovy hevitra ny Koperativa sy ny Ministeran’ny Fitaterana mikasika ilay fampiakarana saran-dalana izay efa nokasain’iretsy voalohany notanterahina nanomboka ny alatsinainy teo.
Fanabeazana mampiaty Omena fiofanana ireo mpampianatra
Fanabeazana tsy manavaka na manilika na iza na iza ny fanabeazana mampiaty. Tafiditra ao anatin’izany ireo ankizy manana fahasembanana sy ireo zanaky ny sahirana.
Lalana Tsarasaotra - Anosy Avaratra Tsy ampy iray volana dia misy simba sahady
Mbola tsy ampy iray volana akory no nampiasana azy dia potika sahady ny lalana mampitohy an’i Tsarasaotra sy Anosy Avaratra, raha ny fampitam-baovao voaray.
Minisiteran’ny angovo “Midina 60% ny famokarantsika herinaratra”
Midina 60% ny famokarana herinaratra amin'izao fotoana izao, hoy ny fanambarana navoakan’ny Minisiteran’ny angovo sy ny akoran’afo. Antony maro no nambara fa antony:
Andry Rajoelina any Egypte Nahazo toky tahaka ny mahazatra…
Tontosa omaly 23 novambra 2021 tany Caire, Egypte ny fivoriana an-tampony faha-21 an'ireo Filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikambana ao anatin'ny Vondrona COMESA.
67 ha Atsimo Vehivavy iray nahatrarana rongony
Vehivavy iray 41 taona no saron’ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP7 teny amin’ny faritra 67ha Atsimo iny ny zoma 19 novambra teo. Raha araka ny fantatra dia nahatratrarana rongony io vehivavy io izay tao an-tranony mihitsy.
Ampanjaka Rabelalao “Tsy nasondrotra hanao politika fa hitondra ankohonana…”
Ny 17 novambra teo no nosorana ho Ampanjaka tany Vohipeno ny mpanao gazety Rabelaolao. Nasondrotra ho Andriambe,
Antaninandro Lehilahy iray nahatrarana zava-maranitra fitondra manendaka
Lehilahy iray 33 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ny CSP3 Antaninandro ny 22 novambra lasa teo rehefa avy nanendaka.
Fitsidihana tany Atsimo Nisy fiarana minisitra nivadika ary potika ?
Fiaram-panjakana ampiasaina minisitra iray no tra-doza, nivadibadika tany Atsimo tany, raha ny loharanom-baovao azo.
Prof Ralison Roger “Aza mafy loha, andao hiresaka an-databatra boribory”
Efa soso-kevitra nomeko foana ny hoe tokony izao no hitondrana aingana ny fanarenana ny toekarena, hoy ny mpahaitoekarena, Pr Ralison Roger,
Madagasikara Tsy fantatra mazava ny isan’ireo manana fahasembanana
Hofantarina manomboka izao ny tena isan’ireo olona manana fahasembanana eto amintsika hahafahana manampy azy ireny ka hahatonga azy ho afaka
Rasambany Alain Désiré “Mandalo kihon-dalana ratsiratsy isika”
Mandalo kihon-dalana ratsiratsy ho an’ny firenena isika ankehitriny satria heverina fa andraikitry ny governemanta ny mijery ny vahaolana maharitra ho an’ilay firenena miaina anatina krizy,
Sekoly nomerika Miisa 30 no tratrarina ho an’ny taona 2021-2022
Hiditra amin’ny faha 8 taonany ankehitriny ny tetikasa sekoly nomerika eto Madagasikara. Tontosa omaly indray ny fanohizana ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Orange Solidarité Madagascar sy ny minisiteran’ny
Reniranon’i Fatihita Nasaina nody ireo mpitrandraka volamena
Hosakanana ny fitrandrahana volamena any amin’ny Reniranon’I Fatihita Faritra Amoron’I Mania. Nanambara ny governora Rtoa Aline Mamiarisoa omaly,